Wondershare MobileTrans User Guide - iOS ka WinPhone
MobileTrans Guide: iOS ka WinPhone
Nzọụkwụ 2. Pịa na "na ekwentị ekwentị Nyefee".
Nzọụkwụ 3. Jikọọ ma gị iPhone na Windows ekwentị gị na kọmputa na iji USB cables. Jide n'aka na ha na-ghọtara site Wondershare MobileTrans.
PS: Mgbe ị jikọọ ma ngwaọrụ, ị nwere ike ịgbanwee na isi iyi na ebe ekwentị mkpanaaka na site na ịpị "tụgharịa" bọtịnụ na usoro.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ị ga-achọ nyefee site n'inyocha n'igbe faịlụ ụdị. Iji nyefee si iPhone ka Windows ekwentị ozugbo, usoro ihe omume pụrụ ịkwado Photos, Videos, na Music faịlụ.
Nzọụkwụ 5. Pịa na "Malite Nyefee" na-amalite nyefe usoro. Na-ma igwe gbazie n'oge dum usoro.
Weghachi ndabere ọdịnaya site Blackberry, iCloud, iTunes, Kies, OneDrive na ndị ọzọ na-Android na iOS ngwaọrụ.
Na-adịgide adịgide ihichapu niile ọdịnaya site na gị ochie Android ekwentị kpuchido nzuzo gị na-leaked.
-Arụ ọrụ na 3,000+ ntị gụnyere Droid, Symbian (Nokia), Windows Phone, na ihe nile ụdị nke iPhones, gụnyere Kacha ọhụrụ iOS 9 ngwaọrụ.
Ọzọ: Kies ndabere ka iOS